Tsy marina: nolavin'i Okraina ny fanolanana ny fiaramanidiny tao Kabul
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Tsy marina: nolavin'i Okraina ny fanolanana ny fiaramanidiny tao Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany Iran • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Okraina • Vaovao isan-karazany
Aogositra 24, 2021
Nolavin'i Okraina ny fanolanana ny fiaramanidiny tao Kabul
Raha ny filazan'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny any Ukraine dia niverina soa aman-tsara tany Okraina avokoa ny fiaramanidina nampiasain'i Kiev hamindra ny olom-pirenena Okrainiana avy any Afghanistan.
Nilaza i Okraina fa tsy nisy fiaramanidina Okrainiana voaroba an-keriny tany Kabul na toerana hafa.
Niverina soa aman-tsara tany Kiev daholo ny fiaramanidina famindrana Okrainiana.
Olona 256 no nafindra toerana tamin'ny sidina telo.
Raha ny filazan'ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny any Okraina dia tsy marina ny tatitra teo aloha momba ny fiaramanidina Okrainiana nisy naka an-keriny tao an-drenivohitra Afghan Kabul ary nalefa tany Iran.
“Tsy nisy fiaramanidina Okrainiana nalaina an-keriny tany Kabul na tamin'ny toerana hafa. Tatitry ny fiaramanidina voaroba fa tsy marina ny fampielezam-baovao sasany, ”hoy ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Okraina Oleg Nikolenko tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny masoivohom-baovao RBC Okrainiana androany.
Araka ny Ministeran'ny raharaham-bahiny ofisialy, ny fiaramanidina rehetra nampiasain'i Kiev hamindra ny olom-pirenena Okrainiana avy any Afghanistan dia tafaverina soa aman-tsara any Okraina. Hatramin'izao, olona 256 no nafindra toerana tamin'ny sidina telo.
Ny mpitondra tenin'ny Organisation Aviation Civile Iraniana Mohammad Hassan Zibakhsh kosa dia nandà ny tatitra momba ny fiaramanidina voaroba. Araka ny filazan'ny masoivohom-baovao Mehr dia nanipika izy fa ny fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Okrainiana dia nijanona tamin'ny famahanana solika tao amin'ny tanànan'ny Iran Mashhad ny alatsinainy ary avy eo nitodi-doha nankany Kiev, izay niantsona tamin'ny 10:50 alina ora teo an-toerana.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny Okrainiana Yevgeny Yenin dia nanambara teo aloha fa nisy olona tsy fantatra no naka fiaramanidina Okrainiana ny talata lasa teo ary nanidina izany tany Iran. Raha ny fanazavan'ilay tompon'andraikitra dia voaroba tokoa ilay fiaramanidina.
Ny sidina mankany Irak, Espana, Kenya, Slovakia dia manomboka amin'ny ...
Nanangana ny fahaizan'ny zotram-piaramanidina hatramin'ny 85% n'ny ...
Airline vaovao lafo vidy indrindra dia mety ho tombony ho an'ny ...
Subaru sy MLS Soccer Team Host Vaovao Manao Andron'ny Alika ...
Miarahaba ny governora amerikana misokatra indray ny sisintany ho an'ny ...
Ogandà dia nampiantrano ny Fampirantiana Vorona Afrikana faha-4 – Big...
Litoania sy Kazakhstan hanangana mpandeha mivantana ...
Ny mason-doza Olaf dia mijery an'i Mexico
Mialà amin'ny South Lake Tahoe, toerana iray ankafizin'ny mpitsidika
Ny Seychelles fizahan-tany dia miomana amin'ny IFTM Top Resa ao ...
Hawaii COVID-19 haavon'ny risika manomboka amin'ny avo ka hatramin'ny antonony
IATA: Be pitsiny loatra amin'ny fomba sisintany re ...
Mpizahatany amerikana voasambotra tany Ukraine noho ny fitafiny ...
Fanafoanana ny Carnival Cruise Glory an'i New Orleans ...
Fomba lamaody manerantany: Ny andraikitry ny Taiwan sy Sri Lanka amin'ny ...
Isle of the Dead Mahazo 1.3 tapitrisa
Ny Bahamas dia afaka maka tombony amin'ny ...